Fanosihosena ny ovulation
Ny iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra amin'ny fitondran-tena amin'ny tsy fahampian'ny vehivavy dia ny fanentanana ny ovulation. Raha voamarina amin'ny fanovàna ianao, dia mila takatrao fa ny famaritana ny aretina toy izany dia tsy azo atao raha tsy misy fivoarana.
Alohan'ny fametrahana fanentanana, ny dokotera dia voatery manao fanadihadiana izay hanampy amin'ny famaritana ny fifanoherana amin'ny fanentanana, ny filàna fitsaboana alohan'ny fotoana ary ny fisafidianana ny fomba fanentanana, ny dosage ny zava-mahadomelina, miankina amin'ny toetran'ny vatanao.
Ny fifehezana ny ovulation dia natao amin'ny oviana polycystika, ny fananganana ny ovaivana mahatsiravina ao amin'ny ovy, izay tsy afaka mandalo ny vanim-potoana feno fananganana sy amin'ny ovulation tsy ara-dalàna.
Ahoana no mahatonga ny ovulation?
Androany, misy fomba maro azo antoka sy mahomby amin'ny fambolena fikajiana:
Fanosihosena miaraka amin'ny fanampian'ny fanafody - inducers of ovulation. Vokatry ny fampiasana azy, dia maniry ny atody mety tsara ho an'ny fambolena ny ovavy vavy. Mandritra io dingana io, ny toby fitsaboana dia mandinika ireo dokotera. Rehefa mamaritra ny fisian'ny ovulation ny dokotera, dia voafidy ny fomba fametrahana: mety ho fanentanana amin'ny IVF na amin'ny fomba voajanahary izany. Raha toa ka misafidy ny fisian'ny ovulation amin'ny IVF ny marary, dia ampy ho an'ny sela 1-2. Raha voavaha amin'ny safidy faharoa ny safidy, dia misy atody maro no takiana amin'ny fangatahana.
Vitamina ho fanentanana ny ovulation. Ireo reny amin'ny hoavy dia mila vitamina sy mikraoba kokoa noho ny olon-kafa rehetra. Ny tena ilàna ny organism izay manomana ny ho bevohoka dia asidra folika. Ny tsy fahampian'ny vatana ao amin'ny vatana dia mety hiteraka vokatra mahatsiravina toy ny fampidiran-dra ny fampandrosoana. Ny singa faharoa, izay tsy dia kely dia iodide. Ankoatr'izany, ny tambajotra dia mahita fa ny famporisihina dia mitaky ny fampiasana vitamin A, C, E, na izany aza, ny tahirin-kevitra toy izany dia tsy tohanan'ny fanafody.
Ny ankamaroany, ny fanentanana amin'ny ovin dia natao amin'ny zava-mahadomelina izay mifehy ny asan'ny faritra misy azy, na koa ny fanomanana ny clostil begite. Ireo fanafody ireo dia manandratra ny ovatra ho an'ny fanabeazana sy ny fananganana ny folicles. Ny malaza indrindra amin'ny fanentanana ny ovulation dia ny fampidirana klofimenom. Atombohy ny fampidiran-doko kely avy amin'ny dosie kely 3-5 ka hatramin'ny 7 taona, na amin'ny faha-5 ka hatramin'ny faha-9. Mifanaraka amin'ny injections, ny fanaraha-maso ny fizotry ny atody amin'ny ultrasound dia atao. Matetika ny ovulation dia miseho 2-3 andro aorian'ny fiterahana.
Mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiterahana
Raha tsy nahomby ny fampidirana voalohany ny ovulation miaraka amin'ny fanampian'i klofimena, dia azo averina avo 5 heny amin'ny androm-piainana izy io. Indrindra miaraka amin'ny fitomboan'ny dingana tsy tapaka. Raha misy fanafody toy izany, dia mihalalina ny ovaire, ary misy miato kely aloha be. Raha toa ka ratsy ny fiantraikan'ny ovulation, dia tokony hokarohina amin'ny hafa ny antony mahatonga ny tsy fahampian-tsakafo faritra. Raha ny zava-misy, raha manaiky ny hamafin'ny oviana ianao - ny fanandramana manaraka ny fitsaboana amin'ny fomba hafa dia tsy hisy ilàna azy.
Tadidio fa ny fomba fanentanana ny fambolena dia tsy manome antoka 100%, koa raha tsy mahomby ianao, aza tapahina ny tànanao, fa miverimberina indray. Raha ny marina, miankina amin'ny antony toy ny taonan'ilay vehivavy sy ny faharetan'ny fanovàna ny fahombiazan'ny fialana amin'ny ovulation. Matetika, amin'ny fanandramana voalohany, dia 10-15% ny vehivavy ihany no bevohoka. Na izany aza, ny fitondrana vohoka taorian'ny fanentanana ny ovulation dia zava-misy izay tokony hiezahana. Ny fahaiza-manaon'ny dokotera sy ny fitsaboana maoderina dia manome fahafahana ny vehivavy hahita ny fifaliana amin'ny reny rehetra.
Ny fahamendrehan'ny endometrium amin'ny fitondrana vohoka
Ao amin'ny Vitro Fertilization
Rahoviana ny hanao fikarohana amin'ny ovulation?
Kitapo mavo vatana - fitsaboana
Taranaka ho an'ny Epiphany - ireo efamira sy fombafomba mahomby indrindra
Photoshoot any Phuket
Kitapo "The Finger"
Ice cream from a banana in home
Bagels amin'ny yogourt
Trano fandriana ho an'ny olon-dehibe
Aiza ny Stounhenge?
Modely maherin'ny maherifo Ashley Graham nanandrana ny sarin'ny "Secret" Victoria's Secret
Tantely ho an'ny fitsaboana - ny fomba mahomby indrindra amin'ny tsiro, tantely sy vodka
Ny ampahany amin'ny vatan'olombelona amin'ny maha-artifacts amin'ny finoana azy: ny misterin'ny reliques ny olomasina
Trends amin'ny fararano-ririnina 2014-2015